Waraaqaha midabaynta: dhalashada, qurxoon, carruurta iyo kuwa kaloo badan | Abuurista khadka tooska ah
ka waraaqaha midabaynta ayaa ku jira moodada oo iyagu waa mid ka mid ah aaladaha ay waalidku leeyihiin, iyo kuwa aan ahayn, inay wax baraan carruurtooda, iyo kuwa aan lahayn, inay midabeeyaan, ama kaniiniyadooda ama xitaa warqad daabacan markaan u gudbinay warqaddaas. taasi waxay ka timaadaa luul.
Maanta waxaan ku tusi doonnaa noocyada kala duwan ee xarfaha loogu talagalay midabaynta, sida loo sameeyo noqo mid iyo waraaqaha ugu fiican si aad ugu soo dhowaato adduunkan yar, oo aad in badan ugu raaxaysato xaddiga badan ee ka kooban waxyaabaha aan ku haysanno shabakadda oo bilaash ah. U tag.
1 Sidee xaraf u noqdaa midabaynta
2 Noocyada xarfaha midabaynta
2.2 Xadhig sare
2.4 Dhalasho Wacan
2.5 Midabaynta iyo jarista
3 Xarfaha ugu fiican midabaynta
3.2 Xadhig sare
3.3 Waalidiinta Geeky
3.4 Sawirro yaryar
3.5 Waraaqaha xumbada
3.6 Xarfaha xoolaha
3.7 Xaraf badan oo xayawaan ah
3.8 Warqad dhalasho farxad leh
3.9 Warqado qurux badan oo midabaynta
3.10 Waraaqo xiiso leh si loo daabaco
Sidee xaraf u noqdaa midabaynta
Caadi ahaan xarfaha midabaynta, ha ahaato sabab kasta ha noqotee, waa inay lahaadaan meelahaaga banaan si ay ugu buuxiyaan midab. Qeyb kasta oo garaaf ah oo ku jirta warqad daabacan ama loox ama shaashadda kombiyuutarka, waa in lagu sawiraa khad madow oo wanaagsan si markaa loo garan karo haddii aan la kulanno bisad, dhisme ama si fudud daruur.
Waa muhiim sababta loo adeegsado midabada saxda ah. Haa wiilkayagu si fiican uma aqoonsana inaan qorrax u soo jeednoWaxaa laga yaabaa inaad qiyaasi karto inay tahay godka laga yaabo inuu derbi ku jiro. Oo markaa way ku dhici kartaa waxyaabaha kala duwan ee sheybaalladaas aan midabeyn doonno.
Waa muhiim in maadaama ay yihiin xarfo lagu midabeeyo, si ku filan ayaa loo qeexaa si markaa si fiican loo fahmo iyo ujeeddooyinka qurxinta waxay u siman yihiin inay adeegsadaan midab ama mid kale. Marka waxaan ku ciyaari karnaa xarfo taxane ah oo lagu garto garbeel oo leh Hippopotamus 'j' ama 'h'. Caddeyntu aad ayey muhiim u tahay in la doorto warqaddaas oo aan mar dambe midabeyn doonno.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo waraaqo ah sababo ama ujeedooyin kala duwan awgood. Waxaan badanaaba haysannaa kuwa carruurta, maadaama ay yihiin hab hagaagsan oo loogu dhiirrigeliyo kan yar ee guriga kujira inay qalinyadooda midabada leh gacanta ku dhigaan oo ay bilaabaan inay soo ogaadaan adduunka midabka leh xarfaha midabaynta. Wax yar ayaynu awoodi doonaa inaan ku raaxeysano adigoon mari doonin adeegsiga tikniyoolajiyad cusub sida taleefannada gacanta ama shaashadda kiniinka.
Tan waxaan ku dhahnaa waa la isticmaali karaa, laakiin had iyo jeer waa la doorbidaa inay ku dhaqmaan go'yaal daabacan taas oo aad wax ku qori karto, qalad sameyn karto oo aad wax ku baran karto.
Noocyada xarfaha midabaynta
Waxaa jira noocyo aan dhammaad lahayn oo xarfo ah oo midab leh. Waxaan leenahay hal dhinac carruurta iyo halyeeyada waaweyn xaaladdan, laakiin waxaan sidoo kale haysannaa iyaga far waaweyn, mid hoose, midab iyo goyn iyo kuwa ugu hambalyeynaya dhalashada. Haddii aan xirfad leenahay waxaan heli karnaa xoogaa waraaqo ah oo noo qalma dhowr sababood awgood. Mid barashada kan yar ee guriga iyo mid kale oo isla barashadan ah hadiyad ahaan adeerkiis ama aabbaha dhalashadiisa xigta.
Waraaqaha carruurta, marka laga reebo si cad loo sawiray oo iyagu amaahiya in si dhakhso leh loo garto, waxay badanaa la socdaan xayawaan. Waxaan haynaa kiisaska maroodiga oo leh "E", bisad leh "G" ama faraska "C". Marka xigta waxaan ku tusi doonaa waxyaabaha aad soo dejisan karto si aad uhesho waraaqo wanaagsan oo lagu midabeeyo taabashada ilmaha.
Inbadan oo toosan oo aan lahayn curve badan, waxaa jira noocyo badan oo xarfaha waaweyn ah. Badanaa labadaba ugu adeeg dadka waaweyn sida carruurta. Waxaan ka heli karnaa iyaga oo la qurxiyey iyo nooc kasta oo xarfaha ah. Haddii aan u tagno xarfo fara badan oo qalooca, ujeeddada laga leeyahay in lagu ekeysiiyo qaar ka mid ah albumyada Beatles ama 60-meeyadii ayaa noqon kara mid ku habboon.
Waraaqaha qurxoon badanaa da ’kasta runtuna waxay tahay inaan haysanno si kasta oo ay yihiin. Midabaynta xarfaha noocyada elven si dhakhso ah ayey maskaxda ugu soo dhici kartaa waxayna na xasuusin kartaa Sayidka siddooyinkan. Sidoo kale mid casri ah oo leh astaamo kala duwan si aad uhesho kan ugu caansan.
Waxay ku xirnaan doontaa qaabka ku dhex jira kuwa quruxda badan, laakiin dhammaan buugaagtaas oo dhan oo ay tahay inaan midabeyno, waxaan gacanta ku haynaa xulashada leeyihiin dhowr saacadood oo wanaagsan aamusnaan midabaynta.
Waraaqaha midabaynta si loogu hambalyeeyo dhalashada uma baahnid warqad dabool ah. Sababta loo dabbaaldego, waxaan ka heli karnaa noocyo wanaagsan oo wanaagsan labadaba kan ugu yar guriga iyo kan ugu da'da weyn. Shumacyada, buufinta iyo astaamaha xafladaha ayaa badanaa ah walxaha la socda nooc furan oo saaxiibtinimo leh.
Waxaan horeyba uheli karnaa qaar asal ah oo asal ah sida kuwan lagu muujiyay xaraf kastaa wuxuu u eg yahay buufin buuxan taasina way fiicnaan kartaa in loo hambalyeeyo dhalashada.
Midabaynta iyo jarista
Waraaqda noocan ah waxaa lagu gartaa xariiqdaas la jaray taas waxaad nooga baahan tahay inaan isticmaalno maqaskeena waanan jari karnaa. Waxaan raadin karnaa kuwa jaraya silhouette ama si fudud kuwa aan ku gooynay maqaska si aan u jarno qaab joomatari ah.
Xarfaha ugu fiican midabaynta
Sawir gacmeedyadan ayaa na hor dhigay taxanaha waraaqaha carruurta ay weheliyaan xayawaankaas qosolka iyo qosolka badan. Waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican liistadan waana mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Xagga sare waxay kuu oggolaanayaan inaad adeegsato arjigaaga shabakadda si aad uga sawirato boggaaga ka dibna si toos ah u soo dejiso ama u daabacdo xarfaha midabada leh.
Websaydhkan waxaad ku haysataa wax walba alifbeetada isbaanishka oo leh xarfo waaweyn oo taxane ah oo kaamil ah. Ma haystaan ​​sawirro ay weheliyaan xarfaha, laakiin keligood imaanshahoodu wax weyn ayey u tari karaan ujeeddooyin qaarkood. Waad kala soo bixi kartaa iyaga oo bilaash ah. Hadana haddii aad rabto inaad ka saarto xiriiriye, waxaad had iyo jeer leedahay barnaamij tafatir ah ka hor daabacaadda.
Link: Xadhig sare
Oo weliba waxaan kaloo midabayn karnaa xarfahan nafteenna oo ah xarfaha geek taas oo aysan jirin waxyaabo qurxin ah. Waraaqaha waxay u taagan yihiin hooskooda isbarbar socda oo leh xariiq dhumuc leh si aan u daaweyno oo aan u ogaano sida loogu isticmaalo xafladaha, dabaaldegyada ama si fudud qurxinta qeyb ka mid ah gurigeenna.
Link: Geeky Waalidiinta
Naqshadaynta xarfaha midabaynta ayaa adeegsanaya qalin inuu noqdo kan ugu asalka iyo xiisaha badan. Xarfaha yar yar ee midabaynta leh waxaa loo isticmaalaa xanaanooyinka iyo dugsiyada halkaas oo aan dooneyno inaan ugu isticmaalno inay ku qurxiyaan webka ama ardaydayadu inay ku qabtaan shaqo abuur aad u wanaagsan. Waxaad si fudud mid walba siinaysaa ka dibna meel dhigtaa cabsi la'aan.
Link: Sawirro yaryar
Waraaqahaani waxay leeyihiin istaroog aan caadi ahayn, laakiin runta in ay yihiin kuwo gaar ah oo asal ah hadaan is barbar dhigno kuwa kale oo badan. Iyada oo leh meel caan ah, sidoo kale way fududahay in la midabeeyo, markaa waxaan kugula talineynaa kuwa leh khadka ugu dheer oo ay ku adagtahay in la galo faahfaahinta.
Link: waraaqaha xumbo
In kastoo ay ku qoran yihiin Ingiriis, sawirkiisu waa mid aad u qosol badan oo fiican in aan ku ridi doonno safafkan. Si fudud u midabayn, inkasta oo ay la socdaan faahfaahintooda, waraaqo taxane ah oo ay la socdaan xayawaan aan lagu waayi karin ururinta carruurtaada.
Xaraf badan oo xayawaan ah
Suuragal maaha inaan lagu soo jiidan tan taxanaha xarafka xoolaha in, inkasta oo ay ku qoran yihiin Ingiriis, aad u soo degsanayso iyaga haa ama haa. Xarfaha waa kuwo aad u waaweyn, in kasta oo sawirka xayawaan kastaa ka dhib badan yahay kana adag yahay.
Link: waraaqo badan oo xayawaan ah
Warqad dhalasho farxad leh
Keeg dhalasho midabkiisa iyo sidaa awgeed ugu hambalyee qofka jecel leh u heellan Kufiican caruurteena oo markaa hadiyad u sameyso, xitaa haddii ay wax qorayaan oo aan cidina fahmin. Waxa la xisaabtamayaa waa is dhexgalka.
Warqado qurux badan oo midabaynta
Waxaad halkan ku leedahay dhowr qaabab xaraf qurux badan midabna diyaar u ah. Waxay lajiraan dhawaq qaangaar ah fikradahana way kici karaan iyagoo ka fiirsanaya tayada weyn ee mid kasta. Waxaan kugula talineynaa inaad riixdo si aad u furto ka dibna u keydiso.
Link: Warqado qurux badan
Waraaqo xiiso leh si loo daabaco
Dhammaad waxaan ku dhammeyneynaa waraaqo taxane ah oo aan daabacno tayo sare leh iyo xallin sare.
Link: xarfaha ingiriisiga
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta
Valencia Caasimadii Naqshadaynta 2022